Omunye kakhulu okhandlayo yemifino izitshalo, etshalwa ezindaweni ekhaya izingadi, iyona amazambane. Traditional kulinywe yayo ubuchwepheshe has nezindleko eside kanye nomshikashika eholela abanikazi abaningi Cottages izingadi ngezinye izikhathi give up kulinywe yayo. Nokho, zikhona izindlela eziningi lapho ungathola okuningi njengoba nje, futhi ezimweni eziningi, ezithela ephakeme, nomshikashika buzoba buncane kakhulu kumuntu.
Ngakho, eyodwa yezindlela ephumelela kakhulu ukutshalwa lesi sitshalo ukutshala amazambane ngaphansi utshani. Naphezu kweqiniso lokuthi abantu abaningi bayakungabaza ukuthi umuntu angaphila le ndlela, le ndlela inikeza cishe ngokwanele ukuba Imiphumela elikhiqizayo, ngijabulisa nabalandeli babo ozinzile futhi isivuno esihle. Ukuze uqonde imfihlo yempumelelo, kubalulekile ukuba ukhulume isimiso amazambane ezikhulayo, bese lokho micro- futhi macronutrients kudingekile le njongo.
Potato tuber kuyathakazelisa okuyisici of amila nezilimo eziyizigaxa emhlabeni imbewu impande kwezitshalo. Ukuthuthukiswa ngempumelelo isiko amazambane kudingekile ngezakhi ngokwanele, okuyiqembu oyinhloko potassium ne phosphorus. Ngaphezu kwalokho, indima enkulu eyadlalwa inhlabathi aeration, ngoba sibonga Ukungena komoya isiko umhlabathi ethuthuka eqinile futhi eziqinile. Ukutshala amazambane ngaphansi utshani inikeza sezulu kunesidingo, ngenxa yokubola kancane kancane utshani ukuma umanyolo kanye breathability ephelele ngaphansi utshani uthanda inkinga inombolo enkulu nezilimo eziyizigaxa ezintsha. Ngesikhathi esifanayo siwulimi emangalisayo utshani semboza ngabo izithombo zezihlahla ukuthi kuvikele umhlabathi ngesikhathi esishisayo izinsuku ehlobo esuka okweqile, futhi emva kwemvula futhi kugcina umswakama phezu kwenhlabathi, ekuvimbeleni ke kusukela zicekela phansi futhi shabalala.
By endleleni, ukutshala amazambane ngaphansi utshani neze indlela entsha ukutshalwa impande izitshalo, njengoba leli su kabanzi abalimi wezwe lakithi ekhulwini le-19. Nokho, ngesikhathi ukusabalala kwemfundiso yokuziphendukela Michurin e-USSR, le ndlela iye undeservedly ukhohliwe, futhi abantu beqala ukwanda amazambane ngendlela esizibona namuhla. Ubunzima kuphela yokukhula amazambane e utshani isidingo isitoko inqwaba utshani, njengoba sokuthuthukiswa evamile nezilimo eziyizigaxa ungqimba yayo akufanele kube ngaphansi kuka-10 cm.
Amalungu bendabuko amazambane vozdelki ubuchwepheshe futhi emi ezisathuthuka yayo, futhi kancane kancane bafunde izindlela ezintsha kakhulu lula ukutshala lolu isivuno ngisho izindlela evamile. Ngakho, kancane kancane zandise izinto ukuthandwa le ndlela, njengoba okutshalwe amazambane ngaphansi uhambo-ngemuva, okwenza bokusebenza komuntu lula kakhulu. Nge umshini wokusika okhethekile, ungafaka ngisho namandla isilinganiso usebenzisa kubalimi, okuyinto lihlelwe nezilimo eziyizigaxa ngokwabo, ngaphandle zokuchitha eziningi umzamo. Namuhla, emakethe khulula, ungakwazi ukuthenga hhayi kuphela benzokultvatory, kodwa futhi tillers wawunamandla ngokwanele, ngawo kungenzeka ukutshala ngisho ensimini amazambane of ehektheleni 1. Ngakho kuyabonakala ukuthi ukutshala amazambane ngaphansi utshani ngesikhathi endaweni enkulu kangaka akunakwenzeka ngenxa yokuntuleka ufune ukuhlanganisa indaba kuphela. Nokho, okutshalwe motor-block amazambane ngayinye ehektheleni 1 Kungenzeka futhi buyafaneleka ngokugcwele kokubili ngokoMthetho ukusebenza ngokuya ukuphathwa isikhathi.
Ngakho, lapho ifingqa, kumele Baphetha ngokuthi uma lezi lokufikela amazambane ukutshalwa indawo engaphezu kuka-20 esingamahektare, kungcono ukusebenzisa ngumsebenzi. Uma umuntu waziphatha ukutshala amazambane ku yakhe cottage ehlobo, 4 kuya kwezingu-8 esingamahektare, notshani kuyindlela efanele kakhulu lapho uzokwazi ukunikeza wena nomndeni wakho bese kuphumela esivunweni esihle.
Phalaenopsis izinhlobo: igama, incazelo, izici kulinywe ekhaya
Savoy iklabishi kulinywe yayo
Thina sikhule garlic: incazelo ezihlukahlukene, ukukhethwa, ezikhulayo ikakhulukazi
Kanjani ukwakha Stam isihlahla
Amathoyizi for namakati inthanethi - fun for isilwane